Wonke umuntu uyazi ukuthi ukukhanya okwanele egumbini - isihluthulelo okududuza abasosizini kuwo. Ngakho-ke, kukhanyiswe yikona uyisidingo. Indlela ukuhlela ke njengoba kahle ngangokunokwenzeka?
Namuhla, ukuthi ukukhanyisa zemvelo kanye yokufakelwa engifanele ukuhamba ngayo, ngomqondo ongokomfanekiso, side by side, akekho phikisana. Hhayi kudala emphakathini lalikhona Imininingwane ukuthi ukukhanyisa okuxubile kuyingozi zamehlo. Kodwa isayensi akusho yima, lesi simangalo iye ngawo atholakala engenabufakazi.
Kuyaqondakala ukuthi ukukhanyisa yokufakelwa, noma kunalokho inhlangano yakhe ngeke kakhulu ngokuthi iliphi uhlangothi endlini ngefasitela ukuze ubone uma zivaliwe izihlahla, ku nezinye izinto eziningi. Kungenzeka ukuthi bophezela ovuthayo amakamelo ehlukene kwelinye ibhilidi. Futhi ngokuphelele kumele acabangele kwazo kanye nezidingo zalabo kuyoba egumbini. Futhi aphoyintimenti yamagceke.
Ngokwesibonelo, endaweni ehhovisi kukhanyiswe yikona ngokuvamile ngempela egqamile futhi liphakathi. Izidingo zengane ngayinye ngayinye abasebenzi ziyabhekelelwa ezingavamile. Kodwa lokhu akusho ukuthi alisekho ithemba! Kungenzeka ukuletha isibani etafuleni noma isibani phansi, okuzokwenza ukuxazulula inkinga izimo ukukhanya enganele. Futhi uma kakhulu ukukhanya, ungazama ukushintsha izindawo nomuntu nozakwabo.
Njengoba lokho kuyoba kukhanyiswe yikona ekhaya, khona-ke zonke kuxhomeke ngokuphelele kuwe. Kodwa ngokuqinisekile Kuyaphawuleka ukuthi hang egumbini ngalinye we Iqhwa, ukuze futhi ukuthi ubeke umkhawulo - hhayi efanele. Iqhwa, ngokuqinisekile egumbini kufanele kube. Kodwa! Akukhona njalo amandla anele okuqinisekisa ukuthi izinga ikhanyisa wonke ikamelo. Futhi izindleko energy kukhona nje "off ukuziphilisa." Ngakho-ke, isixazululo okunengqondo ngokwengeziwe - ukusetshenziswa ukukhanya isilinganiso Chandeliers kulekelelwa ukukhanyisa wendawo. Ngakho, eceleni kwesitulo, isibonelo, isibani ongema ukuze usetshenziselwe ukufunda, futhi eduze ikhompyutha, ungafaka isibani ekhethekile, okuzokwenza umsebenzi ngokunethezeka. Futhi ekhishini kufanele zahlela izibani ezikhethekile ngaphezu kwamanzi umsebenzi ezokwenza wasendlini ikhiqize kakhudlwana.
Ikhwalithi kukhanyiswe yikona kuzoncika onjani izibani esetshenziswa. izibani Mhlophe komlilo kumele uyekwe. Abanaso ukunikeza enamandla ecucuza elikhanyayo, kodwa athatha ugesi. A ehlukile uyakufanelekela - Fluorescent izibani, okuyizinto eqolo ngaphezu kwanoma "okhokho" yabo, kodwa recouped ngokushesha.
By endleleni, ungakhohlwa ukuthi ukukhanya kudingeka akusebenzi nje kuphela kubantu. Izitshalo zidinga kunjengoba nje okuningi! Ngakho-ke kubalulekile ukuba ucabange futhi mayelana nendlela ukuhlela ukukhanya akhulise. Lapha, ikhambi elilungile beyoba ukukhanya imithombo Fluorescent. Phela, nabo basuke ingabekwa ngempela eduze simila, ngaphandle kokwesaba ukumlimaza. Faka izibani Kunconywa ehlobo okuyisilinganiso sabangu-3-4 amahora, futhi ebusika - ku 6-8.
Yilokho ngakho elula!